म्यागजिन – खबरम्यागजिन
भाजपाको हस्तक्षेपको कारण गोरामुमोले विचारधारामा सम्झौता गर्नुपऱ्यो: महेन्द्र छेत्री
September 15, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि 0
खबरम्यागजीन डेस्क गोरामुमोका प्रवक्ता महेन्द्र छेत्रीले आफ्नो गठबन्धन दल भारतीय जनता पार्टीले गोरामुमोमाथि ‘नियन्त्रण’ गरेपछि गोरामुमोले आफ्नो विचारधारा अनि क्षेत्रियतामा सम्झौता गर्नुपरेको आरोप लगाएका छन्। महेन्द्र छेत्रीले गुरामुमो अहिले केवल भाजपाको इशारामा चल्ने दल भइसकेको […]
सांसद राजु विष्टलाई ह्यान्डसम प्याकेजमा ल्याइएको प्रमाणित- केशवराज पोखरेल
August 23, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि 0
खबरम्यागजिनडेस्क केशवराज पोखरेलले सांसद राजु विष्टलाई ह्यान्डसम प्याकेजमा ल्याइएको प्रमाणित भएको बताएका छन्। उनले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘सांसद राजु विष्ट प्याकेजमा ल्याइएको सांसद थिएछन्। गोरामुमो अनि अन्य गठबन्धन राजनैतिक दलहरूले मुद्दाको लागि […]
बङ्गाल भाजपा अध्यक्ष दिलिप घोषले गरे उत्तर बङ्गाल राज्य मागको समर्थन
August 21, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि 0
खबरम्यागजिन डेस्क सांसद राजु विष्ट कालेबुङ आएको बेला खबरम्यागजिनले क्याबिनेट मन्त्री जोन बारलासित सोधेको थियो, जोन बारला उत्तर बङ्गाल राज्य चाहने र राजु विष्ट बङ्गालभित्र कै पिपिएस चाहने एकैठाउँ उभिएर के सन्देश दिन खोजिएको हो? […]
निरज जिम्बाको भगुवाकरण
August 18, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि 0
आफूलाई गोरामुमोको बताउने निरज जिम्बाको भगवाकरण भइसकेको छ। भगवा रङ्गले उनलाई निलिसकेको छ। त्यही कारणले त हो, जब भाजपाको आलोचना हुन्छ, जब भाजपालाई प्रश्न गरिन्छ, जिम्बा प्याच्च बोल्छन्। उनलाई बिझाउन शुरू हुन्छ।तर आजको स्थिति हेर्दा […]
मदन तामाङ हत्याका आरोपी विमल गुरुङलाई किन लगायो त सिबिआईले मुद्दा? कारण यस्तो छ
August 15, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि 0
मुद्दामामिला यो सन् २०१७ देखिकै थाँतीमा रहेको विषय हो। अहिले यसको मेन्सनिङ हुँदा मात्र यसरी खबरमा आएको हो। वास्तवमा मामिला चलिरहेकै थियो। तर बीचमा तीन साल विमल गुरूङको ठेगाना थाहा नहुँदा कोर्टले नोटिस पठाउन सकिरहेको […]
दार्जिलिङ -सिक्किम विलय कति सम्भव?
August 2, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि 0
बहस यो लेख हामीले सोसल मिडियाबाट प्राप्त गऱ्यौं। लेख अङ्ग्रेजीमा थियो, जसलाई हामीले नेपालीमा अनुवाद गरेका छौं। अहिले पिपिएसको विकल्पबारे अनेकौं प्रस्तावनाहरू देखापरिरहेको छ। अवकासप्राप्त लेफ्टिनेन्ट जनरल शक्ति गुरुङले दार्जिलिङ-सिक्किम विलयबारेका सम्भावना र औचित्यबारे धेरै […]
स्मिता सोताङ-का तीन कविता
August 1, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि 0
दुरी समय कत्ति बलियो छ। गुड्दा गुड्दै रोकिदिएको छ पृथ्वीको मुटु। सँगै तिम्रो पाइला। तिमीले आफिस जान नपाउँनुको असहनीय पीडा छोराले सङ्घार नाघ्न नपाउँनुको दु:ख र मूल ढोका बन्द हुनु यसचोटि फरक छ। […]
दिपा मेवाहाङ राई-का तीन कविता
मागिदिनु छ आमालाई *** सप्तह रङ इन्देणी भित्रबाट एक कुच्ची रङ तानेर निलो रङमा रङ्गाइ दिनुछ सादा सादा आमाको जिन्दगीको रङ छेक्नु छ बाँध जनतसाथ निर्दोष नयनका डिलमा परेलीबाट अनमोल मोती दाना नपोखिउन् […]
वन्दना राई-का तीन कविता
पक्का उभौली लाग्नेछ ****** मेरो शिरमाथि उदाएको सूर्य एक स्वर्णिम बिहानी लिएर आदिवासी बस्ती हुँदै चोइटिएर बचेको एक टुक्रा समय ब्युँझाउन आइपुगेको छ बसन्तले वैशाखलाई हुर्काइ जेठलाई काखी च्यापेको बेला सभ्यताको उद्गमथलो, यो भूमिमा मुलवासी […]
हिरादेवी वाइबा-का तीन कविता
श्रावण *** हत्केलाका रेखाहरुमा मिलाएर कोर्नु छ मलाई त, -मेरै सपनाका आकृतिहरु -कर्मका धर्साहरु, -म हुनुको/ मेरा अस्तित्वका छापहरु – मेरा पद्चापहरुले छोड्ने डोबहरु अनि कोर्नु छ मेरा आफ्नो समयका प्रतिबिम्बहरु ओ प्रिय […]
सन्दर्भ: राजु विष्टको सदनमा वक्तव्य
July 28, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि 0
लेखनाथ छेत्री दार्जिलिङको भाजपा सांसद राजु विष्टले आज संसदको रूल 377 अन्तर्गत आफ्नो कुरा राखे। भाइरल बनिरहेको यस एक मिनट सैंतालिस सेकेन्डको यस वक्तव्यमाथि अहिले पहाडमा मिश्रित प्रतिक्रिया चलिरहेको छ। कतिले यसलाई केवल ओडारमा देउसी […]
27 जुलाईको कथा
July 27, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि 0
आज 27 जुलाईको दिनलाई स्मरणमा राख्दै ‘अब…’ पाक्षिक पत्रिकाको 16 अगस्त 1986 को अङ्कमा प्रकाशित लेखलाई सामाजिक सञ्जालमा राखिदिॅंदैछु। नयाँ पुस्तालाई जानकारी दिॅंदै अनि पुरानाहरूको स्मृतिलाई ब्युॅंझाउॅंदै। – सी.के.श्रेष्ठ रमाहट पोखिएको थियो 27 जुलाई 1986को […]
विनय तामाङको राजिनामामाथि म एक्लै केही बोल्न सक्दिन, केन्द्रिय कमिटीको बैठकले निर्णय गर्छ- अनित थापा
July 15, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि 0
खबरम्यागजिन डेस्क मोर्चा दोस्रो खेमाबाट पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङले आफ्नो पद अनि दलको साधारण सदस्यताबाट राजीनामा दिएपछि दलको महासचिव अनित थापाले प्रतिक्रिया दिएका छन्। अनितले बताएअनुसार विनयले दार्जिलिङको आफ्नो निजी आवासबाट राजीनामाको घोषणा गर्दैगर्दा अनित […]
विनय तामाङले त्यागे गोजमुमो-2, अब अर्कै पार्टी गरेर तेस्रो राजनैतिक अध्याय शुरु गर्ने घोषणा
उनी भावुक बन्दै रुँदै विमल गुरुङलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘दाजु, तपाईँले मलाई 2017 मा आरोप लगाउनु भयो, तर मैले जनता बँचाउन, झण्डा बँचाउन, पार्टी बँचाउन मैले यसो गरेको थिएँ।’ उनले विमल गुरुङलाई अपिलै गरेर भने, […]
भानुभक्तको ‘डबल रोल’
July 13, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि 0
सी. के श्रेष्ट (भानुभक्त आचार्य र विवादको पहिलेदेखिकै नाता रहिआएको छ । ती विवादहरू कति त चाखलाग्दा छन् तर कति भने झिँझेटलाग्दा पनि छन् । यो लेख त्यही क्रममा फेरि अर्को विवाद खड़ा गर्ने उद्देश्यले […]
भानु जयन्ती कार्यक्रममा किन अनित थापा मात्र?
विश्लेषण दार्जिलिङको चौरस्तामा आज भानु जयन्ती मनाइयो। साहित्यिक अनि जातिय पर्व तर गहिरो तरिकाले हेर्दा नितान्त राजनैतिक थियो। पश्चिम बङ्गाल सरकारका जनजाति कल्याण मंत्री बुलुचिक बराई, सिलीगुडी नगरनिगमका अध्यक्ष गौतम देव अनि मोर्चा दोस्रो खेमा […]
दलाई लामा: एक आत्माको लडाइँ
July 6, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि 0
१७ मार्च सन् १९५९ को दिन एक 23 वर्षिय लामा सिपाहीको भेषमा ल्हासाको आफ्नो दरबारबाट रातारात पलायन बने। उनीसँग त्यतिबेला तिब्बतका केही मन्त्री, उनका भक्त अनि तिब्बती नागरिकहरूको लस्कर थियो। उनले त्यस दिनदेखि यता […]
गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई सिक्किमतिरबाट हेर्दा
July 3, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि 0
विचार बंगालबाट छुट्याएर दार्जीलिङलाई कुनै नाम दिएर अलग राज्य निर्माण भयो भने त्यो सिक्किमवासी तथा दार्जीलिङवासी दुवैलाई हितकारक बन्नेछ। यस विषयमा यदि दार्जीलिङले कुनै सकारात्मक आन्दोलन गर्‍यो भने पुनश्च सिक्किमले सहयोगका निम्ति अवश्य हात बढ़ाउला […]
June 30, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि 0
‘पहाडका जनता तृणमूल मन पराउँदैनन्’, यहाँ आम धारणा यही छ। ममता व्यानर्जीले यही बुझेर चुनावमा मैदान विमल अनि विनयलाई छोडिदिइन् भन्छन् धेरै। विनय यसलाई ममताले निभाएको ‘गठबन्धनको धर्म’ भन्छन्। विमल यसलाई ममताले ‘क्षेत्रिय राजनीतिको सम्मान’ […]
भारतमा नयाँ राज्यहरूको माग र औचित्य
June 27, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि 0
सन्दर्भ राजनीतिक सहमतिको अभावमा अनि जब राज्यहरूमा धेरै हिस्साहरूको लागि व्यापक निहितार्थहरूदेखि माथिको चिन्तालाई उठाउन सकिन्छ तब व्यापक परामर्श पछि साथै निर्माणको निम्ति एक राम्रो प्रकारको उपलब्ध रोडमम्यापको आधारमा नयाँ राज्य निर्माणको निर्णय लिन सकिन्छ। […]
गोर्खाल्याण्डको निम्ति मान्छे रोप्नुपर्छ
June 23, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि 0
हामीले हाम्रो समाजलाई ढङ्गको समाज बनाउन खोज्छौँ भने ढङ्गकै मान्छेहरू रोपेर खेती गर्नुपर्छ। गोर्खा समाजले खेतीबिना पनि राम्रो विभूतीहरूच फलाएका हुन् तर तिनीहरुको प्रजनन् नै भएन। सन्तान अघि बडेन। एउटा रुख उम्र्यो र मासियो पनि। […]
June 20, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि 0
कथा मान्छेले मानेर बोलाउने भगवान माथि बस्छ र मेरा बाउआमाले राखिदएको नामको भगवान म तल बस्छु । यतिखेर हामी दुई भगवानबीच समानता उही छ कि माथिको भगवान सधैं चुप छ । तल धरतीको म भगवान […]
के गोर्खाल्याण्डको मुद्दा अब मरिसकेको हो?
June 16, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि 0
बहस राजनैतिक हिसाबकिताब पनि गोर्खा समुदायको लागि ठीकठाक हुनेवाला छैन। बङ्गाल विधानसभामा उत्तर बङ्गालका ५४ विधायक छन्। यसमा चार अथवा पाँच विधायकहरूको उपस्थितिले कस्तो छाप छोड्ला? प्रश्न गम्भीर छ। उत्तर बङ्गालका कुल आठ संसदीय क्षेत्रभित्र […]
सिस्टम कोल्याप्स भइसकेको छ
April 30, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि 0
कोरोना कहर मार्च २०२१ सम्म भारतले लगभग ९० देशलाई भ्याक्सिन निर्यात गर्ने काम गऱ्यो। तपाईंले गुगल गरेर हेर्नुभयो भने थाहा पाउनहुन्छ, आजसम्म भारतमा कुल जनसंख्याको केवल एक प्रतिसत जनसंख्याको मात्र पूर्ण टीकाकरण भइसकेको छ। यस्तो […]
‘११ जातलाई जनजाति’-को मुद्दा केवल धोका हो
मुद्दा ११ जनजातिको दर्जा माग र अधिकार भारतीय गोर्खाहरूको लागि ठुलो राजनीतिक समस्याको समाधान होइन। यो त एउटा गोर्खा जातिको लागि धोका मात्र हो। भारतीय गोर्खाहरूको जातीय एकतालाई बिथोल्न र तोड्ने प्रयास मात्र हो भारतीय […]
किन फेल हुन्छ गोर्खे नेतृत्व पटक-पटक?
April 26, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि 0
विचार बिमल भन्छन्, भाजपाले १२ वर्ष लण्डायो। बजगाई र जिम्बा भन्छन्, बिमलले लण्डाए र अझै थपहरू। भाजपाले बिमललाई लण्डाएको होइन, बिमल आफूले भाजपाको चरित्र नबुझेको हुनाले लण्डिएका हुन्। बिमलको क्षमता लण्डिएको हो। बिमलको वैचारिकता, बौद्धिकता […]
कविता समाजी सर्कसको बहुरूपी जोकर हो- राजा पुनियानी
April 25, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि 0
संवाद- राजा पुनियानी ‘हस्तक्षेप’-को अस्तित्व हराइहालेको जस्तो त लागेन । उल्टा बढ़ेर पो गएको छ होला । एज ए आन्दोलन चैं कता कता फेडेड भयो कि । टिमको इन्टर्नल इस्युजले गर्दा । हुँदा हुँदै हस्तक्षेपी […]
कविता प्रणय शंकर आरनको भुप्रोमा दन्किएको ताप अनि मन्दिरको दियोमा सल्किएको राप कुन पवित्र कुन अपवित्र! दुवैले शुद्ध पार्ने काम गर्दछन्, आगोले कलुषित काई निकाल्छ एउटाले फलाम गालेर अर्कोले फलामे मन पगालेर […]
लघुकथा प्रदेशमा किन अक्सिजनको यत्रो अभाव छ? किन कुनै पूर्व तयारी गरिएन? जिम्मेवार पक्षले झट्टै न्यायोचित कदम उठाउन्। यस विषयमा न्यायालयले झट्टै कानुनन् आदेश सुनवाइ जारी गरून्। विमल राई मरेकोमाथि कात्रो न्यायमूर्ति चरण दासको भोगाइमा […]
‘वाद’-मा रहेर सिर्जना गर्नु अप्राकृतिक हो- सुदीप पाखरिन
संवाद- सुदीप पाख्रिन युवा कवि सुदीप पाख्रिन पूर्वी नेपाल, धरानका हुन्। ‘आदिम मौनता’ र ‘दगुरिहिँड्ने बाटो’ कवितासङ्ग्रह प्रकाशन गरेका पाख्रिनले कृष्णभूषण बल युवा सिर्जना पुरस्कार २०७५ पाएका छन्। कविता सिर्जनासँगै अनुवाद गर्न रुचाउने उनले पछिल्लो […]
झाऱ्यो सेनाः सीआरपीको छापामारी जारीः सिंहमारीमा फाइरिङ-फेरि एकको मृत्युः जम्मा तीनको मृत्यु (40,867)
दार्जीलिङमा फेरि भड्कियो हिंसाः गोलीबारीमा एक पुलिस अधिकारीको मृत्युःजारी छ गोलीबारी (35,811)
विमल गुरूङले आज अचानक खुलासा गर्दै भने-दिल्लीले बोलाउँदैछ, गोर्खाल्यान्डको लागि हो भने मात्रै जान्छुः गुरूङ उत्रिए सांसदको राजिनामा मागको विपक्षमा (33,071)
मोर्चाले केन्द्रलाई दियो अल्टिमेटमः भन्यो- 8 अगस्त6बजीभित्र केन्द्रले वार्ता बोलाएन भने9अगस्तदेखि आन्दोलन कठोर गर्नेछौँ (30,746)
अनिश्चितकालीन बन्द जारीः ‘हामी यो पाली पनि चुक्यौं भने एक चम्ची पानीमा डुबेर मर्दा हुन्छ’- विनय तामाङ (27,417)
विमल गुरूङले भने, ‘तयारी बस्नु, म आउँदैछु’ : विमलको स्वागतमा लाखौं जनता सडक उत्रने (24,929)
बङ्गालको विरोधमा उत्रियो मिजोरम (23,905)
पिसाबमा रगत बग्न थाल्यो, तरै पनि अनशनकारीहरू भन्छन्, दबाई होइन गोर्खाल्याण्ड चाहिन्छ (23,458)
गिरी टोली दिल्लीमाः मोर्चाको कार्यनीतिमा फेरबदलः केन्द्रले देशको सुरक्षाको हवाला दिएर मोर्चालाई सम्झौतामा ल्याउन सक्ने सूत्रको शङ्का (22,508)
वरूण मृत्यु मामिलामा धेरैवटा सनसनीपूर्ण खुलासा: “मोर्चाको अर्को गुटले भनेको थियो, ‘तेरो दाजुलाई जेलबाट निकाल्नु छ भने हाम्रो गुटमा आइज, तर हामीले सम्झौता गरेनौँ’ (22,014)
केन्द्रिय गृहमन्त्रीको निम्तोः गोजमुमो-जीएमसीसी टोलीको दिल्ली प्रस्थान (21,856)
आज जे भयो, त्यसको दण्ड विनय र अनितले हन्ड्रेट टेन पर्सेन्ट पाउनेछन्, गोर्खाल्याण्ड माग्ने कोही छैन भन्ने देखाउन कुटपिट गरिएको हो- विमल गुरूङ (21,434)
पवारले दिए गृहमन्त्रीलाई त्रिपक्षीय वार्ताको दबाउ: केन्द्रले चाँड़ै वार्ताको प्रस्ताव दिनेछ: राजनाथ (20,821)
बनियो राष्ट्रीय गोर्खाल्याण्ड समितिः अबको आन्दोलन बौद्धिक नेतृत्वले गर्नेछ-मुनिष तामाङ (20,810)
टिस्टा भेल्लीमा चार पुलिस कर्मी घाइतेः बतायो पुलिस र स्थानीयले बेग्लाबेग्लै कथा (20,762)
बन्द खोल्ने नखोल्नेबारे निर्णय गर्ने दायित्व मोर्चाको हो- विमल गुरूङ (20,269)